I-Google Analytics inesici esihle, ikhono lokulandela usesho lwangaphakathi kusayithi lakho. Uma usebenzisa ibhulogi ye-WordPress, kunendlela elula yokwenza lokho setha usesho lwesayithi le-Google Analytics:
Khetha isayithi lakho ku-Google Analytics bese uqhafaza ku-Hlela.
Zulazulela ekubukweni ofuna ukusetha khona iSayithi Search.
Chofoza Izilungiselelo zokubuka.
Ngaphansi Kwamasethingi Wokusesha Kwesiza, setha Ukulandelela Ukucinga Kwesiza KUVULIWE.
Ku-Query Parameter field, faka igama noma amagama aqoka ipharamitha yombuzo wangaphakathi, njengokuthi “term, search, query”. Kwesinye isikhathi igama liba yincwadi nje, efana no “s” noma “q”. (I-WordPress “s”) Faka imingcele engafika kwemihlanu, ehlukaniswe ngamakhoma.
Khetha ukuthi ufuna noma cha ufuna i-Google Analytics ihlubule ipharamitha yombuzo kusuka ku-URL yakho. Lokhu kukhumula kuphela imingcele oyinikezile, hhayi amanye amapharamitha ku-URL efanayo.
Khetha ukuthi usebenzisa izigaba noma cha, njengamamenyu okwehliswayo ukwenza ngcono ukuseshwa kwesayithi.
Chofoza Faka isicelo
Tags: usesho lwesayithi le-google analyticsusesho lwesayithi le-googleukusesha isayithiusesho lwe-wordpress
Nov 5, 2007 ngo-2: 31 AM
Siyabonga ngethiphu, isanda kufakwa!
Nov 5, 2007 ngo-12: 44 PM
Kuhle, Doug! Bengingazi ukuthi lokhu kuyatholakala.
Aug 11, 2010 ngo-12: 05 PM
Siyabonga ngethiphu! Bengikufake lokhu ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi bengingaqiniseki nge-parm's search futhi bengizibuza ukuthi kungani bekungabikwa okwamanje. Ubhekane nezinkinga zombili!
I-Oct 8, i-2011 ku-7: i-57 PM
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi, ngikwenzile lokho! 🙂
Kukhona ne-pluginMeterMeter, ongayisebenzisa ukubona ukuthi yiliphi igama elingukhiye nokuthi kuseshwe kangaki kubhulogi yakho